Sidee tiknoolajiyadu u noqon doontaa sanadaha 50 - Geofumadas
Sidee tiknoolajiyadu u noqon doontaa sanadaha 50
Maarso, 2009 tabo cusub
Su'aashu waa nasiib xumo, haddii ay taasi ku kalsoon tahay waxay noqon doontaa mid ka badan. Laakiin tanu waa kalsoonaanta of buug maanta in aan soo iibsaday ee dukaanka ka, uu qoray weriyaha la odhan jiray Mike Wallace ka badan hogaanka in meel quduus ah oo waqti nagu martiqaaday in ay ka fekeraan dhici kara 50 sano gudahood lagu hayo dib loo eegay hore oo ka mid ah waxa ka dhacay 50 ee ugu dambeysay. Keliya weydii awoowgii aad ku aragtay sanadka 1947 in ay jiri lahayd taleefanka gacanta oo leh kamarad la mid ah maadama lagu soo bandhigay 1997.
Magaca buugga waa "Fiiri adduunkeena 50 mustaqbalka"Oo waxaa lagu saleeyay waraysiyo lala yeeshay dad kuwaas oo helay abaalmarinta novel ee hal-abuurnimo sayniska ama taas ayaa Dhacdooyin in jabiyay noqday aan hadda ognahay sida teknoolajiyada caadi ahaan loo isticmaalo in tamar, isgaarsiinta, daawo, dhaqaalaha iyo horumarka sayniska ee guud .
Waxayna kugula wiilkayga, waxaan ahaa la yaabanahay hadii la this waan ogahay laga yaabaa mustaqbalka, waxaan ka dhigay heshiis; 50 sano gudahood, marka fuushan xoqidda badan 80 (haddii aan ku guulaysto) iyo markii uu ku imaanayo 60, waxaan ka xaadho yaabaa ciidda kitaabka maktabadda iyo faqa dhaqanka duug ah loo yaqaan "reading", waxa ay ku siin flip ah carcajearnos ah cusub ... sida aan sameynay maanta, halka uu isaga qudhiisu ku shuqloonyihiin Nicmo uu kula edition cusub ee majaladda Nintendo halka aan sannadood 6 oo ciddiyahana iska arkaya cover ee magazine ka kooban characters ka School Musical High.
Taasna waa tan marka la eego tiknoolajiyada ay ku adkaato inay ku kalsoonaato tusaale ahaan, sida Google Earth ee sanadaha 5, ama imisa RAM oo RAM ah ayaa lahaan doona AutoCAD 2015; waa inaad aragto Sidee ahaa sawirkii 60 sano ka hor. Aan ka sheegno sannadihii 50.
Laakiin akhrinta ma aha qashin, dhageyso inaad la hadasho jilayaasha sida:
Vint Cerf, madaxweyne ku-xigeenka Google; oo loo yaqaan 'aabaha internetka'
Kim Dae-jung, oo ah madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Kuuriya
Ronald Noble, Xoghayaha Guud ee Interpol
Norman Borlaug, oo ku guuleystay abaalmarinta Nobel Prize; loo yaqaan "aabaha kacaanka deegaanka"
Craig Newmark, horjoogaha Internetka iyo aasaasaha craigslist
Waxay noqon kartaa wax ka badan dhiirrigelinta, guud ahaan, haddii aan akhrino qoraalka qeexan sida midda haatan qaadata daqiiqado 32. Halkan waxaan ka tagaa qaar ka mid ah khadadka la iftiiminayo ee aan helay soo jiidashada inkastoo aan si dhib yar u eegin buugga:
Waxaad ku xiran kartaa gaarikaaga habeenkii oo dibna u buuxi batteriga, adigoo isticmaalaya koronto waqtigaas oo tamarta tamarta ah ee warshadda deegaankaagu ay yar tahay.
Malcolm Bricklin, oo ah asaasaha Subaru y yoke America
Cayaaraha kombiyuutarka iyo xaqiiqada dhijitaalka ahi waxay hagaajin karaan tayadooda, si ay dadku u helaan inta badan madadaalada halkaas oo aysan ku jirin safar dhab ah, akhris ama riwaayado, masraxiyad ama hawlo kale.
Gerardus't Hooft, Nobel of Physics at 1999
Socdaalka caasimadda iyo kobaca dhaqaalaha ayaa yarayn doona galbeedka. Shiinaha iyo Hindiya waxay u badan tahay inay ku tartamayaan tartamayaasha, maaha inay sheegaan inay noqon doonaan hoggaamiyeyaasha dhaqaalaha adduunka.
Dhibaatooyinka ugu waaweyn ee aan la kulmi karno waa hab-nololeedyada iyo dabeecadaha ku lug leh mushahar dhaqaale: cayilka, culeyska iyo jimicsi aan jirin, oo ah jimicsi-jecel bulsho.
Waa akhris macquul ah oo aan kugula talineyno booqashadaada xigta ee buug-gacmeedka.
Google Earth majallado
Post Previous«Previous Cartography of 60 sano ka hor
Post Next Bentley ayaa bedeshay qaabka dhacdadeeda sanadlaha ahNext »